Zvinhu zvekutarisa usati watenga iyo yakakodzera yakakodzera wiricheya iwe | Karman® Mawiricheya
Zvinhu zvekutarisa usati watenga iyo yakakodzera yakakodzera wiricheya iwe
Mawiricheya wedzera yako kufamba uye zvinopa iwe nerunyararo rwekufamba kuri nyore chete nesimba risina musono.
Dzimwe nguva, nekuda kwekusadya kune zvaunoda iwe pachako, unogona kutenga zvine njodzi zvichibva pane zvaunofarira zvakajairika. Nekudaro, zvakakosha chaizvo kuti iwe ugare uchiisa zvaunoda zvepanyama pakutanga kana uchitenga wiricheya.
Uyezve, iwe unofanirwa kukwanisa kuchinja nyore nyore kubva kune yako wiricheya kuzvigaro, mibhedha, nezvimbuzi.
foldable wiricheya Transit Go
Zvinhu zvekutanga zvekutarisa pano: • Zviyero zvako zvepanyama: Kurema uye Saizi. • Shanduko dzinogona kuitika mune ramangwana rekufamba kwemuviri wako, kureva kutyoka kunogona kuramba kuchikura nekufamba kwenguva.
Mutemo wechigunwe wechigaro chakakwana-upamhi: 3cm- 4cm yakakura kudarika kuwedzerwa kwechiuno chako.
Ongorora: Ingotenga iyo wiricheya pane iyo Max-Wiremu-Inobvumidzwa inotaurwa zvakajeka. Inofanira kunge iine mashanu lbs kupfuura yako muviri-huremu.
Rigid-Furemu kana Inopetwa wiricheya?
Pane maviri makuru mhando of Mawiricheya.
Rigid-Furemu Mawiricheya: Zviri nyore kufambisa asi hazvigone kupetwa.
Foldable Mawiricheya: Zviri nyore kusvika kutakura andmore chinogadziriswa pakuchinja kwekuda. Zvisinei, ivo vakaoma kufambisa.
Mawiricheya ane simba kana Chinyorwa Mawiricheya?
Mawiricheya ane simba (ine zvemagetsi kufamba uye maitirwo) zvakanaka asi zvinodhura uye inoda mushandisi kuve mune yakanaka mamiriro epfungwa kusarega chero zvinogoneka Njodzi inoitika kunze kwekuziva kwake kwakashata.
Saka, chete kana iwe uchinyanya kutsamira panyama uye usingakwanise kuzvimisikidza pachako kunyange zvishoma, ipapo chete, iwe unofanirwa kuenda kunopihwa simba wiricheya.
Kunyange zvakadaro, vane chakakomba chakakomba. Kazhinji, wiricheya vashandisi vanokurudzirwa kuchengeta yavo yemitezo yemuviri ichifamba. Kugara uchiedza kuzvidhonza vanovatambisira goridhe kwavari maererano ne kurovedza muviri-mabhenefiti.
Zvemagetsi zvinodzora zvinoita kuti zvive nyore kufambazvinogona kutungamira mukusadikanwa kwemhasuru kurasikirwa nezvimwe zvokurapa mamiriro emushandisi wenguva dzose.
Kuchenjerera Kwakakomba: Kukwana kwakakwana kunotonyanya kukosha kana chiri cheya ine simba sezvo kumhanya kwayo kungave kune njodzi kana chigaro chisina kusununguka patsvina yako.
Kune rimwe divi, Chinyorwa Mawiricheya ipa marudzi maviri. 1. Kuzvifambisa wega. 2. Isingazvifambise.
Kuzvifambisa wega: Inoshandisa mavhiri akakura kumashure, inokodzera avo vanoshuvira kuchengetedza yakakwira danho rekufamba-kuzvimirira.
Isiri-yega-inozvifambisa yega: Mavhiri ayo ekumashure madiki uye iwe unoda kana munhu mumwe chete kuti uite kusunda ari wiricheya kukurega ufambe. Ehe, mumwe hurema.
Zvakakosha Zvaunoda Zvemumwe Nezvinodiwa:
Vamwe vanhu vanofarira kugara vachienda pamubhedha kana pasofa. Ivo vanofanirwa kupeta yavo Mawiricheya kupfuura kazhinji.
Kune avo: Sarudza imwe iri nyore kupetwa pasina kushandisa chero zvishandiso.
Kana iwe uchida kutamba mitambo, sarudza a lightweight uye yekuwedzera-nhare wiricheya, zvimwe zvakagadzirwa yeCarbon Fiber kana Titanium (inodhura hazvo.)
Zvakatipoteredza, mauri kuzoshandisa iyo wiricheya, ndechimwe chinhu chakakomba kureva kwenzvimbo ine humid, zvirinani kwete kutenga Simbi kana Aluminium wiricheya sezvavanogona kukanganiswa nekukurumidza.
Saizvozvo kune inopisa mamiriro, Aluminium inogona kukodzera.
Kune avo vanopedza yakawanda yenguva yavo mukati meimba: compact wiricheya ichashanda zvakanyanya.
Kune vanoda zvekunze, zvakasarudzika zvinhu zvekutarisa mune wiricheya ndeaya: 1 :. Kuturika Furemu 2. Pneumatic Tires kana Makomo Matayi.
Nzira yakatwasuka yekusarudza yako Mawiricheya: Dhiraivha: -base.
Kumashure, Mid kana, Pamberi-vhiri dhiraivha? 1. Pamberi-vhiri rekutyaira: Zvakawanda zvinoshandiswa uye zvinobatsira zvekushandisa kwekunze. 2. Mid-vhiri dhiraivha: Inosarudzika yekutsvedza indoor kufamba.3. Mberi-vhiri dhiraivhu: Inobatsira mukubata zvine mutsindo mativi-ematombo uye isina-mugwagwa yakaoma nzvimbo.
Kuti uzviise muchidimbu, zvese ndezvekuisa pamberi pechimwe chinhu pamusoro pevamwe.
Uye, chekupedzisira asi kwete chidiki, Control System.
vamwe Mawiricheya vari kusanganisiraInternet Yezvinhu zvekugadzira upenyu zvirinyore kune wiricheya vashandisi. Zvino, unogona controlelectronic zvishandiso kureva Terevhizheni, Gedhi Kamera, Kamuri Kiyi, nezvimwe. kushandisa dzako zvinodzora wiricheya.
Asi, izvi zviri kubhadhara mari yakawanda uye kukanganisa kwechirongwa ichi kuri panjodzi nekukanganisa kwekuchengetedza. Chenjera uye sarudza nehungwaru!
Yeuka: Mawiricheya vari vaviri customizable. Ndokunge, iwe unogona kugadzirisa yako wiricheya kune ako zvaunofarira zvisinei nyangwe zvikashanduka nekufamba kwenguva.
Zvese mune zvese, chigaro chega chega chine zvayakanakira nezvayakaipira, asi zvaunoda zvepanyama zvinofanirwa kuuya pekutanga. Iwe haudi chese-chinotenderera cheya icho chinoita zvese asi kurerutsa mafambiro ako uye kunyaradza muviri wako.
Taura nesu kana iwe uchida rumwe ruzivo nezve kudiwa kwekuongororwa kana mhando dzeese ari maviri manyowani uye emagetsi Mawiricheya kuKARMAN HEALTHCARE.
Tinotenda kufarira kwako uye tine shungu dzekukubatsira. Ngatitsvagei mhinduro dzenyu pamwe chete.
Maitiro ekuti uwane zvakawanda kubva muhupenyu iwe uchibatira pawiricheya
Maitiro ekurarama hupenyu hwako hwakanakisa nehurema